Hery Rajaonarimampianina – CSM Tokony ho fieren’ny malemy ny fitsarana – Triatra 4 décembre 2017 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
NEXTHOPEHery Rajaonarimampianina – CSM Tokony ho fieren’ny malemy...
NEXTHOPERANARISON TsilavoRasolo Elise
Hery Rajaonarimampianina – CSM Tokony ho fieren’ny malemy ny fitsarana – Triatra 4 décembre 2017
Ny filohan’ny repoblika, Hery Rajaonarimampianina no filohan’ny filankevitry ny mpitsara, na ny CSM araka ny voafaritry ny lalàm-panorenana, izy rahateo no nandray ireo mpikambana vaovao izay vao lany ny faha- 6 ny volana novambra lasa teo teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha. Ny minisitry ny Fitsarana Rasolo Elise Alexandrine sy ny sekretera jeneraly ny CSM Andriamahavory Christian no nitarika ny delegasionina miisa 20 avy amin’ny CSM. Noho izany taorian’ny fahataperan’ny fepotoam-piasan’ny birao teo aloha , sy ny fahavitan’ny fifidianana dia niroso tamin’ny famindram-pahefana ny birao teo aloha sy ny vaovao. Ny fahavitan’ny famindram-pahefana ihany koa no fanombohan’ ny fe-potoam-piasan’ny birao vaovao. Nandritra ny fihaonana ny sabotsy lasa teo io no nampitain’ ny filoham-pirenean Hery Rajaonarimampianina hafatra maro ho an’ ireo birao vaovao “Ny fahaleovan-tenan’ny fitsarana izay izao no miantoka azy sy ny filankevitra ambony ny fitsarana , dia tompon’andraikitra feo amin’ izany. Araka ny voalazan’ny lalàm-panorenana ” hoy ny filoha raha nampatsiahy ny andraikitra tamin’ ireo mpikambana vaovaon’ ny biraon’ny CSM. Miampy hatrany izany hafatra izany mahakasika indrindra ny fahasarotan’ny fitsarana ny raharaham-bahoaka “ny asa izay hotanterahina dia voafaritry ny andininy faha-107 mikasika ny deontolojia amin’ ny fandraisana andraikitra sy ny fanapahan-kevitra” hoy hatrany ny filoha nanazava.
Anisan’ny ambetin-tenin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny tokony hahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana “ ny fitsarana dia tokony ho fieren’ny manidika , ary tokony hanjakan’ny mangarahara”. Tao ho ao tokoa dia nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, fa maro ireo zava-nitranga teto amin’ny firenena, izay toa tsy mametraka ny tany tan-dalàna sy ny fiarovana ny vahoaka. “ Ilaina amin’izay ny fahasahiana izao, fanehoana fahavitrihana sy fitiavan-tanindrazana. Mila izany ny firenentsika”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena. Nisintona ny sain’ny birao vaovao ihany koa ny filoha, indrindra teo amin’ny lalana izay nizoran’ ny rehetra eo amin’ ny sehatry ny asa, ilaina hoy ny filoha ny fandalinana, sy ny fijerena ny lalan-kizorana vaovao hanatsarana ny lasa . “ Tokony hataon’ ny mpikambana rehetra ho tombony iraisana ny fisoloan-tenan’ ny mpitsara rehetra manerana an’i Madagasikara hialana amin’izay mety fikorontanana. Ilainareo ihany koa ny fanatsarana ny tontolon’ny asa , mba ahafahana mandray anjara amin’ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto amin’ny firenena. Tokony hapetrakareo ny tokony hanajan’ny rehetra ny lalàna, aorian’ny fisainana sy fandalinana lalina, anatin’ ny fahamarinana , manaraka ny fahafahan’ ny rehetra maneho hevitra” hoy hatrany ny fanambarana izay ataon’ ny filoha manoloana ireo birao vaovaon’ ny CSM.
Teo ampamaranana dia napetraky ny Filoham-pirenena ny tokony hahafitaratra ny mpikambana eo anivon’ ny CSM sy ireo mpitsara rehetra, eo amin’ ny asa, manoloana izay mety ho sakana eo ampanatanterahana ny asany “maro ireo teboka tokony hapetraka eo amin’ny fanatsarana sy fanatanterahana ny asa. Masahia mandray andraikitra, manoloana ireo tranga maro izay mampikolay sy efa tabatabain’ny vahoaka” hoy ny Filoha teo ampamaranana.
Previous articleHery Rajaonarimampianina – CSM : Tokony ho fieren’ny malemy ny fitsarana – Triatra 4 décembre 2017
Next articleFitsarana Anosy Nohitsian’ny Filoham-pirenena ny SMM « ny feon’ny fieritreretan’ny mpitsara no fahaleovantena voalohany » Triatra 20 décembre 2017